သူ့ဖာ သူ ဖြစ်​သွားပါလိမ့်​မယ်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » သူ့ဖာ သူ ဖြစ်​သွားပါလိမ့်​မယ်​
သူ့ဖာ သူ ဖြစ်​သွားပါလိမ့်​မယ်​
Posted by naywoon ni on May 25, 2014 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 8 comments
” သူ့ဖာသူ ဖြစ်​သွားပါလိမ်​မယ်​ ” တဲ့
ဗမာ​တွေ ​ပြော​လေ့ရှိတဲ့စကားပါ ။ ပြီး​တော့ ​နောက်​တစ်​ခုရှိ​သေးတဲ့ ။ တစ်​ဆက်​ထဲ ​ပြော​လေ့ ရှိတဲ့ စကားပါ ။ ” မိုးပြို​တော့လဲ အများ​ပေါ့ ” တဲ့​လေ ။
ပထမစကားက သူ့အလိုလို အရာအားလုံး အချိန်​တန်​ရင်​ပီး​မြောက်​သွားမှာပဲ ။ ​ဘေးက​နေ ဘာမှ တွန်းအား​ပေးဖို့ရာမလို ။ တိုက်​တွန်း​မေးဖို့ အား​ပေး အား​မြှောက်​ ပြုဖို့မလို ( တစ်​ကယ်​​တော့ တွန်းဖို့အားမရှိတာ ၊ တိုက်​တွန်းဖို့ အား​ပေးအား​မြှောက်​လုပ်​​ပေးဖို့ ထပ်​ပြီး လိုက်​စရာ / ရင်းစရာ အချိန်​​ငွေ လူ လုပ်​အား ထပ်​ပီးမထည့်​နိုင်​​တော့တာ ) ။ အဲ့ဒိလို​နေရင်းနဲ့ အချိန်​တန်​​တော့ ရသမျှ ​လေး လက်​ထဲပိုက်​ အိမ်​ပြန်​ကြသူ​တွေချည့်​ပဲ ။
တစ်​ညက လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​က အိမ်​ပြန်​မလို့ ပိုက်​ဆံရှင်းပြီး ထလိုက်​​တော့ မှ အတူထိုင်​​နေကျ သူငယ်​ချင်း ကို​ဇော်​ ​ရောက်​လာတယ်​ ။ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​မှာ စကား​ပြော​ဖော်​​ပေါ့ ။ သူက မြို့အ​ရှေ့ဘက်​ ရွာသစ်​ဆိုတဲ့ ရွာက ။ ခု​တော့ အ​နော်​ရထာရပ်​ကွက်​​ပေါ့ ။ ရပ်​ကွက်​သာ ဖြစ်​လာလို့ အရင်​ မြို့​ပေါ်က သူ​တွေ လို အိမ်​ခွန်​​တွေ မီးခွန်​​တွေ အမှိုက်​ခွန်​ ဘာခွန်​ ညာခွန်​ ​တွေ သာတန်းတူ လိုက်​​ဆောင်​​နေရတယ်​ ။ လူ​နေမှု စနစ်​က ​ပြောပါ့​လောက်​​အောင်​တိုးမလာ​သေးပါဘူး ။ အရင်​ ရွာလို့ သတ်​မှတ်​တုန်းကလည်း နွားနဲ့ဖက်​ရုန်းပြီး လယ်​ထွန်​ရတယ်​ ။ ခုလည်း ထိုနည်းလည်း​ကောင်းပဲ ။ အရင်​ကလည်း ​နွေရာသီ ​တော တက်​ပီး မိုးတွင်းအတွက်​ ထင်းဝါး ခုတ်​ရတယ်​ ။ ခုလည်းထူးမခြားနား ။
” ဟ ​မှောင်​​တောင်​​နေပီ ခုမှလာတာလား ” ​ပေါ့ သူ​နေတဲ့​နေရာက ခု​ရောက်​​နေတဲ့ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​နဲ့ ဆို တစ်​မိုင်​ခွဲ နှစ်​မိုင်​က အနဲဆုံးကိုး ။
” ဟုတ်​တယ်​ဗျ ပဲတီစိမ်းခင်း ​ရေသွင်း​နေလို့ ”
ဟိုက်​ ။ ကြားဖူးကြလား ??? ပဲတီစိမ်း ​ရေသွင်းစိုက်​သတဲ့ ။ မိုးကလည်း ကြီးကြီးမားမား မရွာ​သေးပါဘူး ။ သင်္ကြန်​ပီးမှ ခုထိ သုံးကြိမ်​​လောက်​ပဲ ဖုန်​သိပ်​ရုံ မျက်​​စေ့နာ​ကောင်းရုံ ရွာလိုက်​​သေးတာ ။ ​နောက်​ရွာမလိုလိုနဲ့ မရွာပါဘူး ။ မြန်​မာပြည်​အလယ်​ပိုင်း ဆိုတာကလည်း ဘင်္ဂလား ပင်​လယ်​​အော်​ထဲ မုန်​တိုင်းရှိမှ မိုးရွာတာကလား ။ ဘင်္ဂလား ပင်​လယ်​​အော်​ထဲ ​နေ့တိုင်းမုန်​တိုင်းကျရမလိုဖြစ်​​နေပြီ ။ ပိုက်​ဆံ တတ်​နိုင်​တဲ့သူ အချိန်​နဲ့ လုပ်​အား(ခ) စိုက်​ထုတ်​နိုင်​တဲ့သူ​တွေက ပဲတီစိမ်း ​ရေသွင်းစိုက်​​နေတယ်​ ဆိုတဲ့အချိန်​မှာ စိုက်​ချိန်​တုန်းကလည်း ဟိုက ဒီက ​ချေးငှား​ပေါင်​ နှံ စိုက်​ထားရတဲ့သူ​တွေက မိုးမှမရွာရင်​ ဘာဆက်​လုပ်​နိုင်​မှာလဲ ။
” သူ့ဖာ သူဖြစ်​သွားပါလိမ့်​မယ်​ကွာ ။ ​ရေမသွင်းနိုင်​တာ ငါ တစ်​​ယောက်​ထဲမှ မဟုတ်​ ။ မိုးပြို​တော့လည်း အများပါ ။ မသကာ သီးနှံ ပျက်​သွား​တော့လည်း ဘယ်​တတ်​နိုင်​မလဲ ။ ဒီတစ်​သီးမရ​တော့လည်း ​နောက်​စိုက်​ရမဲ့ သီးနှံ​တွေ ကျန်​​သေးတာပဲ ။ ”
အဲ့ဒိလိုအ​ပြော​လေးနဲ့ မိုးစုန်းစုန်း ချုပ်​ရတာလည်း အခါခါ​ပေါ့ ။
​ပြောချင်​တာက ” မလုပ်​တတ်​လို့ မဟုတ်​ ” မလုပ်​နိုင်​လို့ အားမတန်​မာန်​​လျော့ ​နေရတဲ့ အ​ခြေခံ လူတန်းစား​တွေ အ​ကြောင်းပါ ။
တစ်​ချို့ကိစ္စ​တွေကျ​တော့ နည်းပညာ အားနည်းလို့ ။ ဒီလိုလုပ်​ရမှန်းမသိလို့ သမရိုးကျ မိရိုးဖလာအတိုင်းလုပ်​လိုက်​ကြတာလည်းရှိရဲ့ ။ ကြာလာ​တော့လည်း ​ခေါက်​ရိုးကျိုး​နေပြီ ။ ဘယ်​က​နေစပြင်​မလဲ ။ ဆင်းရဲ မွဲ​တေမှု ပ​ပျောက်​​ရေး ဆိုပြီး ပိုက်​ဆံချည့်​ လိမ့်​​ချေး​နေလိုမဖြစ်​ပါဘူး ။ ​ခေါက်​ရိုးကျိုး​နေတာ​လေး​တွေ လည်း ပြန်​​ဖြည်​ဖို့ လိုလိမ့်​မယ်​နဲ့ တူရဲ့ ။ ဖတ်​မိသူရဲ့ အ​တွေးထဲ အမှိုက်​​လေး တစ်​စ ထည့်​​ပေးလိုက်​တာပါ ။
တခါတ လေဒီလိုပဲအားမတန်လို့ မာန်လျော့ရတဲ့အချိန်
တွေရှိပါတယ် ။ အ တွေးတစယူသွားပါပြီ ။
အဲဒီ စကားနှစ်ခွန်းလုံးက အားမရှိတဲ့လေသံကြီးနော်
စစ်မရောက်ခင် မြှားပလိုင်းကျပျောက်နေလို့တော့ ဘယ်ရမလဲပေါ့
အား​လျော့ကျတာ​ပေါ့ကွယ်​ ။ မိုး​လေကမမှန်​ …. လုပ်​သမျှက အဆင်​မ​ပြေ ​နောက်​ဆုံး​တော့ ကံကိုပဲ ပုံချပြီး လည်​စင်းခံ​နေရတဲ့ လူတန်းစား​ပေါ့ ။ ဒါ​ပေမဲ့ အထင်​မ​သေးနဲ့​မောင်​ရင်​ သူတို့​တွေ ​ပေါက်​ကွဲရင်​ ငလျင်​လှုပ်​သလိုပဲ အ​ပေါ်ထပ်​အ​ဆောက်​အအုံ တစ်​ခုလုံး ပြိုလဲကျသွားနိုင်​ရဲ့ ။ အဲ့အ​ခြေခံ လူတန်းစားကို ဘယ်​လို မြှင့်​တင်​​ပေးမလဲ ။ သုံးသပ်​ကြပါဦး ။
မီလျှံနာတွေလို ချမ်းသာအောင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိဘူး။
(ကိုယ်တိုင်လည်း အဲလိုမချမ်းသာတော့ )
တော်ရုံထမင်းမငတ်အောင်တော့ ရိုးသားပြီး ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိရင်ရပါတယ်။
ငွေအရင်းအနှီးမရှိရင် ပခုံးထမ်း၊ အလုပ်ကြမ်းလုပ်လို့ရတယ်။
ငွေအရင်းအနှီး နည်းနည်းနဲ့ ကြုံရာကျ ဘမ်းဈေးရောင်းစားလို့ရတယ်။
ရောင်းရင်းဝယ်ရင်းနဲ့ပဲ ရိုးသားရင် အကြွေးပေးမယ့်သူ မရှားလို့ ရှိတဲ့ငွေရင်းထက် ပိုပြီး ရင်းနှီးရောင်းဝယ်နိုင်လို့ ကြီးပွားသွားကြသူတွေ အများကြီးပဲတွေ့ဖူးတယ်။
တချို့တော့လည်း ရောင်းရင်းဝယ်ရင်း စားရင်းသောက်ရင်း(သောက်လို့ကုန်တာနဲ့ အလုပ်ပျက်တာနဲ့) တစ်နှစ်သုံးတွေ လုပ်ရင်း ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းသွားသူတွေလည်း အများကြီးပေ့ါ။
ဟိုတလောက ဖဘမှာ ဘွဲ့ရ အလုပ်ကြမ်းလုပ်မယ်ဆိုပြီး သရုပ်ပြဆန္ဒထုတ်ဖော်တာ တွေ့လိုက်မိတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာလည်း ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည် ကြော်ငြာတွေချည်းပဲမို့ စဉ်းစားရ ခပ်ခက်ခက်ပဲ။
ကျွန်​​တော်​​ရေးပြ​နေတာက စိတ်​ကူးယဉ်​မဟုတ်​ဘူး​နော်​ ။ အ​ခြေခံ လူတန်းစား ​တောသူ​တောင်​သား​တွေရဲ့ ဘ၀နဲ့ လက်​​တွေ့ လူ​နေမှု ​ခေါက်​ရိုးကျိုး​နေတာကို ချပြတာပါ ။ ၁၉၈၉ က​နေ ၁၉၉၇ ​လောက်​ထိ ​တောင်​သူ​တွေနဲ့ လက်​ပွန်းတစ်​တီး ​နေရတဲ့ ရုံးမှာ အလုပ်​လုပ်​ခဲ့ဖူးတယ်​ ။ အဲ့ကာလ အတွင်းမှာ မြို့နယ်​ သုံးခု ​ပြောင်း​ရွေ့ ခဲ့ ရဖူးတယ်​ ။ ရှစ်​နှစ်​​လောက်​ကာလ အတွင်းမှာ ​တောင်​သူ ငါး​သောင်း​လောက်​နဲ့ လက်​ရည်​ တစ်​ပြင်​တည်း ​နေထိုင်​ခဲ့ဖူးတယ်​ ။ ခုထိလည်း ​ဆွေမျိုးသားချင်း ​တွေထဲမှာ ဆင်းရဲတဲ့ ​တောင်​သူ ချမ်းသာတဲ့ ​တောင်​သူ ​တွေနဲ့ လက်​ပွန်းတစ်​တီး ​နေ ​နေရတုန်းပဲ ။ ​တောင်​သူ ဆိုတာ ကြိုးစားတိုင်းအရာမ​ရောက်​တတ်​ဖူး ။ ရာသီဥတု​လေးကလည်း ကိုယ့်​ဖက်​ကပါမှ အဓိက ကျန်းမာ​ရေး မိသားစုလိုက်​​ကောင်း​နေပါမှ ။ ရွာ​တွေမှာ ​ဆေး​ပေးခန်းမရှိဘူး ။ သားဖွားဆရာမ ဆိုတာကလည်း ရွာမှာအမြဲ မရှိတတ်​ ။ ရှိပြန်​​တော့လည်း သူ့ဝမ်း​ရေး အရ တစ်​ခြားအလုပ်​နဲ့ တွဲဖက်​လုပ်​​နေပြန်​ ။ ​ရောဂါတစ်​ခု စွဲကပ်​လာရင်​ ဗဟုသုတမရှိလို့ ကုန်​သင့်​တဲ့ အတိုင်းအတာထက်​​ငွေကုန်​တတ်​တယ်​ ။ တစ်​ရာသီ ရတဲ့ ​ငွေထက်​ ​ကြွေးပါတင်​သွားပြန်​​ရော ။ သွားပီ ​နောက်​တစ်​ရာသီ စိုက်​ဖို့ ပျိုးဖို့ ​ငွေတိုးနဲ့ ရှာ​ပေ​တော့ ။ ဒီကြားထဲ ပါးစပ်​​ပေါက်​​တွေက စားဖို့ အ​ကြွေးယူရ​သေး ။ အ​ကြွေးဆိုရင်​ တင်​ထားတဲ့ ​ဈေးက ​ခေါင်​ခိုက်​ ။ ရွာမှာ ကျင်​လည်​ပီး ​တောထဲ ​တောင်​ထဲမှာ ကျက်​စားတဲ့ သူ မြို့​ပေါ်တက်​လာဆို​တော့ ​ရေထဲကငါး ကုန်း​ပေါ်ပစ်​တင်​လိုက်​သလိုပဲ ။ အဲ့ ရွာမှာ လုပ်​စားစရာ ​မြေ မရှိ​တော့ဘူးဆိုရင်​​တော့ ​ရောက်​တဲ့​နေရာ တဲထိုးပီး ​နေရမှာပဲ ။ အဲ့ဒိအချိန်​ ဘာကိုမှလဲ ဂရု စိုက်​မှာ မဟုတ်​​တော့ဘူး ။
အဘ နီ နှင့်ကတော့ ၊ ရွာသားဟောင်း အခြင်းခြင်းမို့ ၊ ဒဲ့ပဲပြောမယ်နော် ။
လယ် ဧက ၂၀ အောက် ပိုင်တဲ့သူတွေ ၊ လယ် ဆက်လုပ်မနေနှင့်တော့ ။
ရှိတဲ့ လယ်တွေရောင်း ၊ မြို့တက်ပြီး ၊ အလုပ်ကြမ်း လုပ်ကြ ။
လယ် ဧက ၂၀ အောက် ဘဲ ပိုင်ပြီး ၊ လယ် ဆက်လုပ်နေသူ ဟာ ၊
အခြေအနေကို နားမလည်တဲ့ ၊ ဆင်ခြင်ဥာဏ် နည်းတဲ့ ငတုံး ။
( ဆင်းရဲသင့်လို့ ၊ ဆင်းရဲနေတဲ့သူ ၊ မ သနားဘူး )
မြို့ မှာ ၊ လက်ကြောတင်းအောင် လုပ်ပြီး ၊ ရိုးသားရင် ထမင်း မငတ်ဘူး ။
ဥာဏ် နဲနဲ ရှိပြီး ၊ အပျော် အပါး ကင်းရင် ၊ သူဋ္ဌေးတောင် ဖြစ်နိုင်သေး ။
ခက်​တယ်​အဘ ​ဖော​ရေ ကျွန်​​တော်​တို့ နယ်​မြို့​လေး​တွေမှာ က ကျွန်​​တော်​အခ​နေထိုင်​​နေတဲ့ မြို့ဆိုရင်​ မြို့​ပေါ်​နေ လူဦး​ရေ ​လေး​သောင်းခွဲ​လောက်​က ​တောရွာမှာ​နေတဲ့ လူဦးေ ရ တစ်​သိန်း​ခြောက်​​သောင်း​လောက်​ရဲ့ လယ်​ယာထွက်​ စိုက်​ပျိုးသီးနှ့ကို မှီပီး စီးပွားရှာ​နေရတာ ။ ရာသီဥတု မှန်​လို့ သီးနှံ အထွက်​​ကောင်းရင်​ မြို့​လေးက ပိုစည်​တယ်​ ။ သီးနှံ အထွက်​ညံ့လို ရွာ​လေး​တွေမှာ ကြပ်​တည်းရင်​ မြို့​လေးက ​ခြောက်​ကပ်​သွားတာ ။ တစ်​ခြား လက်​မှု ပစ္စည်းမထွက်​ဖူး​လေ ။ ပီး​တော့ ၈၀% က ​တော​နေလူတန်းစား သူတို့​တွေ ၀ယ်​စားမှ ၀ယ်​၀တ်​မှ ၀ယ်​သုံးနိုင်​မှ ​ငွေလည်​ပတ်​မှုက များလာတာ ။ ပြီး​တော့ ​ကျေးလက်​​နေလူတန်းစားက မြို့​ပေါ်တက်​လာရမှာ သမ​လောက်​​ကြောက်​တာကလား ။ သူ​နေထိုင်​ရာဝန်းကျင်​မှာပဲ ​ပျော်​တာကိုးဗျ ။
” သူ့ဖာသူ ဖြစ်​သွားပါလိမ်​မယ်​ ” ဆိုတာကတော့ လက်လျှော့တဲ့စကားပဲဗျ….
“မိုးမှမရွာရင်​ ဘာဆက်​လုပ်​နိုင်​မှာလဲ ” ….
ဟုတ်တယ်ဗျာ..ခုထိသဘာဝတရား(မိုးနတ်မင်း) ကြီးကို အားကိုးနေရသေးတယ်ဆိုတော့..